sosegado : မျက်မှန်နဲ့ မိန်းမတွေကို ကျနော်မုန်းတယ်
Posted by sosegado at 8/29/2012 12:00:00 PM
လွှတ်ကောင်းဗျာ။ အကြောင်းအရာရော အရေးအသားရော၊ ကျနော့်ပတ်​ဝန်းကျင်မှာလည်း အဲလိုပုံပြင်မျိုးတွေရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ဆက်ရန်ကိုဖတ်ချင်စိတ်ပြင်းပြစွား စောင့်နေပါမည်... မျက်မှန်ဖြုတ်ထားတာကြာပေါ့ :D
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး နည်းနည်း လန့်သွားတယ်... ဒါမယ့် ဆက်ရန် စောင့်နေပါတယ်... တခုရှိတာက တချို့မိန်းမတွေက မျက်မှန် ပါပါ မပါပါ တခါတခါ တော်တော် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်...း)
ပုံ / မျက်မှန်နဲ့ အန်တီ
ခေတ်နဲ့ လိုက်အောင် ရေးနိုင်ပါတယ်၊ မျက်မှန်တတ်ထားတဲ့မိန်းမတွေဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ စားရေးသူပုံဖေါ်တာကို ဆက်စောင့်နေပါမယ်၊ ခုမှ တစ်ယောက်ထဲရှိသေးတယ်၊
I'm wating for next .
reading with wearing glasses.
pls write quickly.
I'm waiting to next .
ei choဆက်ရန် စောင့်နေပါတယ်
မျက်ကပ်မှန် တပ်ထားတယ် :P
This is really nice and showing the culture conflict at Myanmar. Sometime you face those issues even when you fall in love Chinese with different background(Cantonese VS Fugainese and so on).
I can't wait for the next section..
"မျက်မှန်နဲ့ မိန်းမတွေကို ကျနော်မုန်းတယ်" ဆိုလို့ လန့်သွားတာဘဲ... အဆက်လေး အထုံးလေး ကိုတော့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်
(ခရိုနီဟုဆိုကာ ချမ်းသာနေသူများကို သိမ်းကျုံးအပြစ်ပြောနေကြသည်၊ ခရိုနီတွင် လုပ်တတ်ကိုင်တတ်၍ ခရိုနီဖြစ်လာသလို အခွင့်ရေး မတရားယူ ညစ်ပတ်၍ ခရိုနီဖြစ်လာသူလည်းရှိမည်။)
မြန်မာပြည် က ခရိုနီ တွေ ကတော့ ဘယ်စာရင်း ထဲ ပါမလဲမသိဘူး ...
ကျနော် မြင်တဲ့ ခရိုနီတွေ ကတော့ တိုင်းပြည် ရှိသမျှ တောတွေပြောင်.. တောင်တွေပြို... မြေလွတ် မြေရိုင်း ဆိုတာတွေ တလက်မ မကျန်အောင်.... သယံဇာတ တွေ ကုန်သွားအောင် ပြည်သူ ပိုင် နိုင်ငံပိုင် ပစ္စည်းတွေ ကို သူခိုးဈေး ပေးပြီး လူသတ်အစိုးရ သူပုန်အစိုးရ နဲ့ ပူးပေါင်း ပြီး မတရား ခိုးယူသွားတဲ့ အခွင့်ထူးခံ သူခိုးကြီး တွေ ဘဲ
(နဲနဲကြမ်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုဆိုဆီ ဝတ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင် နဲ့ တောင် ရန်ဖြစ်ချင်နေ တဲ့ ရွှေစင်ဦး ဖြစ်နေပါတယ်)
ဖတ်ကောင်းနေတုံး ဆက်ရန်ဆိုလို့ တိုလို့ တစ်လစ်
တရုတ်မျိုးနွယ် မျက်မှန်တပ် အကဲခပ်တဲ့ နည်းက
အစဉ်အဆက် ရိုးရာမပျက် ခုချိန်ထိ အရိုးဆွဲနေတုန်းပေါ့
ချစ်သူနစ်ဦးသိပ်ချစ်ကြပြီး နားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ ဇာတ်သိမ်းလှမယ်လို့ထင်မိတယ်။
I just changed my glasses to contact lens for the sake of this story.
Anyway I like this story.
But I just changed my glasses to contact lens because of this story.
ထုံးစံ အတိုင်း ကောင်းခန်းရောက်ရင် မီးပြတ်တော့တာပဲ
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲကြည့်ရသလိုပါလား ဆိုစီရေး)
ရောက်တယ်နော်.. ဆက်ရန် မျှော်နေပါတယ်..
ဟုတ်ပနော် မျက်နှန်တက်ထားတဲ့ မိန်းမက မုန်းစရာ....:(
ကြို့က်ပါတယ် နဲနဲလေး သိုင်းဝိုင်းတာများတာတစ်ခုဘဲ တို့က သိတ်စိတ်မရှည်တတ်တာါလည်းပါတာပါ။ ကိုးရီးယားကားကြည့်၇င် တို့က စိတ်မရှည်ဘူး ပွစိပွစိလုပ်တယ် တို့အစ်မက ပြောတယ်။ ဟဲ့ .............အဲဒါက . အရသာတဲ့.....................။
အီး..မျက်မှန်တပ်ပြီး ဖတ်နေတာဗျ..မျှော့နေတယ် ခင်ဗျ..